အိမ်သာမဝင်ခင် လက်ဆေးသင့်လား..................... - Hello Sayarwon
ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်ပြီး..အိမ်သာဆင်းမှ လက်ဆေးရမှာလေ။ အိမ်သာမဝင်ခင် လက်ဆေးရတယ်လို့ မကြားဖူးပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်တာလို့ တွေးနေပြီလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းကနေ တောက်လျှောက် ကြားလာခဲ့တာက အိမ်သာကအဆင်း၊ အစားအစာတွေကို မစားခင်၊ အရာဝတ္ထုတစ်ခုခု၊ ညစ်ပေတဲ့အရာတွေကို ကိုင်တွယ်ပြီးတိုင်းမှာ လက်ကို သေချာ စင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပါဆိုတာပါ။
ဒါပေမယ့် တကယ်ကတော့ အိမ်သာ မဝင်ခင်မှာလည်း လက်ကို သေချာ ဆေးကြောဖို့လိုပါမယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အိမ်သာမဝင်ခင်မှာ လက်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ လက်က ကိုင်တွယ်ထိတွေ့မှု အများဆုံးဖြစ်သလို လက်ချောင်းတွေမှာ သာမန် မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေ အများကြီး ကပ်ငြိနေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလက်တွေနဲ့ ရောဂါပိုး ဝင်ရောက်ကူးစက်လွယ်တဲ့ အမျိုးသားအင်္ဂါ၊ မိန်းမကိုယ်၊ စအိုစတာတွေကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့တာက ရောဂါပိုးတွေကို ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲ အ​ရောက်ပို့လိုက်သလို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က အိမ်သာဝင်တဲ့အခါ ကိုင်တွယ်တဲ့ တံခါးလက်ကိုင်၊ အိမ်သာကရေပန်းတွေ နဲ့ အခြား အသုံးအဆောင်တွေမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေရှိနေိုင်ပါတယ်။ အိမ်သာဆိုတာက ဘက်တီးရီးယား များလွန်းတဲ့နေရာပါ။ ဒီနေရာတွေကို ကိုင်တွယ်တာက လက်မှာ ဘက်တီးရီးယားတွေ ကပ်ပါလာမှာပါ။
ဒါကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံး ဘက်တီးရီးယားတွေကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ အိမ်သာမဝင်ခင် ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့မှု မလုပ်ခင်မှာ လက်ကို ရေနဲ့ ဆပ်ပြာသုံးပြီး သေချာ သန့်စင်ပါ။
အိမ်သာကို အသုံးပြုပြီးချိန်မှာလည်း လက်ကို သေချာစွာ ဆေးကြောဖို့ လိုပါမယ်။ ဒါကတော့ မစင်တွေနဲ့ အိမ်သာက နေရာတွေမှာ ကပ်တွယ်နေနိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေဖြစ်ကြတဲ့ E. coliပိုး၊ ရေယုန်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်၊ Streptococcus ရောဂါပိုး၊ အသည်းရောင် အသားဝါ A နဲ့ E ရောဂါပိုး အပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော ရောဂါပိုးတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ပါ။
အိမ်သာ အဆင်းမှတင်မဟုတ်ဘဲ အိမ်သာဝင်တဲ့အချိန်မှာပါ လက်ဆေးတာက ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တာ အပါအဝင် စအိုကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေ၊ မိန်းမကိုယ်ကို ဝင်ရောက်ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေနဲ့ အရေပြားပြဿနာ အမျိုးမျိုးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်သာအဝင်မှာ လက်ဆေးတာကို အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေက ပိုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အိမ်သာသွားတဲ့အခါ အရှေ့ကနေ အနောက်ကို ဆွဲယူတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ သန့်စင်ပေးပါ။ ဒါမှ ရောဂါပိုးတွေကို အထိရောက်ဆုံး ဖယ်ရှားနိုင်မှာပါ။
Do you really have to wash your hands every time you use the bathroom? The definitive answer, according to science https://www.businessinsider.com/bathroom-hand-washing-after-using-the-toilet-2018-8 Accessed Date 15 December 2020
Dr. Roach: Wash hands before or after toilet? Do both https://www.detroitnews.com/story/life/advice/2015/03/16/keith-roach-health-wash-hands/24866989/ Accessed Date 15 December 2020